မသိချင်ယောင်ဆောင်ရင် ပေးဆပ်မှုများပါတယ် ရဲရဲကြီး"ဖြူ"လိုက်ပါဆိုတဲ့ လင်းလင်း
တစ်နိုင်ငံလုံးက မိဘပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ နေပြည်တော် မူကြိုကျောင်းမှ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာတော့ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာ သမီးငယ် Victoria က သူမကို မတရားကျင့်ကြံသူတွေကို နှုတ်ကနေရော၊ ဓာတ်ပုံကိုရော ရွေးချယ်ပြသခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် လင်းလင်းကလည်း သူစောင့်ကြည့်နေတဲ့ သမီးလေး Victoria ရဲ့ အမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။ “နိုင်ငံရေး သီလ၊သမာဓိ ပြည့်စုံလွန်းလှသော မိဘ ဆရာသမားတွေပြောတဲ့ ” တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရဲ့ ‘တန်ဖိုး’.. မသိချင်ယောင်ဆောင်ရင် ပေးဆပ်မှုများပါတယ်။နောက်ကျတယ်မရှိပါဘူး။ ရဲရဲ ” ဖြူ “လိုက်ပါ။”
“လူဆိုတာအမှားမကင်းဘူး ဆိုသော်လည်း ‘ ဘယ်လောက် မှား မှာလဲ? ‘ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေဟာ လူ့သမိုင်းတွေကို ကြီးကျယ်စွာ ပြောင်းလဲစေပါတယ်။””ကိုယ့်ရဲ့ လိပ်ပြာကို ငရဲမီးနဲ့နေ့တိုင်းထိုးပြီး သောကဗျာပါဒတွေကို နေ့တိုင်းမျိုချမလို့လား?။’ တာဝန်ယူပါ ‘ ။ ပြီးတော့ ‘ တာဝန်ခံပါ ‘ ။’ ဘယ်လောက်မှားမှာလဲ ? ‘ ကိုယ်တိုင်ဖြေပါ။” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
သမီးလေး Victoria ရဲ့ အမှုကတော့ တရားမျှတမှုကို ရရှိဖို့ တဖြည်းဖြည်း နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Victoria လို အဖြစ်ဆိုး၊ အတိတ်ဆိုးမျိုး နောက်ထပ်ဘယ်သူမှ ထပ်မကြုံပါစေနဲ့လို့ မိုမိုလေးမှ ဆုတောင်းပါတယ်။
CRD-Rowena,Source: Lin Lin’s fb
မသိခငျြယောငျဆောငျရငျ ပေးဆပျမှုမြားပါတယျ ရဲရဲကွီး”ဖွူ”လိုကျပါဆိုတဲ့ လငျးလငျး
တဈနိုငျငံလုံးက မိဘပွညျသူတှေ စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့နကွေတဲ့ နပွေညျတျော မူကွိုကြောငျးမှ သကျငယျမုဒိနျးမှုကတော့ တဈနတေ့ဈခွား စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ စကျတငျဘာလ (၁၁) ရကျနမှေ့ာတော့ နပွေညျတျော ဒက်ခိဏခရိုငျတရားရုံးမှာ သမီးငယျ Victoria က သူမကို မတရားကငျြ့ကွံသူတှကေို နှုတျကနရေော၊ ဓာတျပုံကိုရော ရှေးခယျြပွသခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
နိုငျငံကြျော အဆိုတျော လငျးလငျးကလညျး သူစောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ သမီးလေး Victoria ရဲ့ အမှုနဲ့ ပကျသတျပွီး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။ “နိုငျငံရေး သီလ၊သမာဓိ ပွညျ့စုံလှနျးလှသော မိဘ ဆရာသမားတှပွေောတဲ့ ” တာဝနျယူမှု၊ တာဝနျခံမှု ” ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျရဲ့ ‘တနျဖိုး’.. မသိခငျြယောငျဆောငျရငျ ပေးဆပျမှုမြားပါတယျ။နောကျကတြယျမရှိပါဘူး။ ရဲရဲ ” ဖွူ “လိုကျပါ။”
“လူဆိုတာအမှားမကငျးဘူး ဆိုသျောလညျး ‘ ဘယျလောကျ မှား မှာလဲ? ‘ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးရဲ့အဖွဟော လူ့သမိုငျးတှကေို ကွီးကယျြစှာ ပွောငျးလဲစပေါတယျ။””ကိုယျ့ရဲ့ လိပျပွာကို ငရဲမီးနဲ့နတေို့ငျးထိုးပွီး သောကဗြာပါဒတှကေို နတေို့ငျးမြိုခမြလို့လား?။’ တာဝနျယူပါ ‘ ။ ပွီးတော့ ‘ တာဝနျခံပါ ‘ ။’ ဘယျလောကျမှားမှာလဲ ? ‘ ကိုယျတိုငျဖွပေါ။” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။
သမီးလေး Victoria ရဲ့ အမှုကတော့ တရားမြှတမှုကို ရရှိဖို့ တဖွညျးဖွညျး နီးစပျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ Victoria လို အဖွဈဆိုး၊ အတိတျဆိုးမြိုး နောကျထပျဘယျသူမှ ထပျမကွုံပါစနေဲ့လို့ မိုမိုလေးမှ ဆုတောငျးပါတယျ။
ရှူတင်ကအပြန်မှာ ခေါင်းမထူနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်အတွက် ကြိုးစားမှုကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ မိုးအောင်ရင်